2. Transfer Samsung si iPhone
3. Transfer iPhone in Samsung
iPhone ama Samung casriga ah, taas oo ka mid ah waa uu ka fiican? Waa su'aal adag oo noocan oo kale ah in aad si fudud looma sheegi karo. Smartphone Samsung waa Rafaa ah ee barnaamijka Android, halka iPhone socda ee macruufka u gaar ah (iPad iyo iPod daydo xiriiri sokow). Hababka kala duwan ee hawlgalka phone iyagu ha dabeecadood oo kala duwan iyo feature, keliya ay haystaan ​​labadaan daydo kala duwan ha.
In this article, waxaan diiradda saaraan kuu sheegaysa barbardhigo u dhexeeya daydo kulul ugu weyn ee u dhexeeya iPhone iyo smartphone Samsung, sida iPhone 5s vs Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5, Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5.
Qaybta 1. iPhone 5s vs Samsung Galaxy S5 Qaybta 2. Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5 Qaybta 3. Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5 Qaybta 4. Samsung vs iPhone, taas oo ah mid aad ugu jeceshahay
Qaybta 1. iPhone 5s vs Samsung Galaxy S5
Waa kuwee casriga jeclahay inaad si fiican, ka 5s iPhone socda ama soo socda ee Samsung Galaxy S5? Shaxda hoose waxay kuu sheegaysaa marka la barbardhigo muhiimka u dhexeeya labada casriga ah. Hadda, aan eegno deg deg ah waxaa at.
123,8 × 58.6 × 7.6mm 142x72.5x8.1mm
Gray, oo lacag iyo dahabna White, madow, iyo buluug, iyo dahab
Apple A7, 64-yara, core dual, 1.3GHz Snapdragon 801,32-yara, core Bawdada, 2.5GHz
macruufka 7 4.2.2 Android
Kaydinta: 16GB / 32GB / 64GB; RAM: 2GB
Kaydinta: 16GB / 32GB;
Garaaca wadnaha monitor
Lugood Samsung Kies
iPhone 5s waa casriga ah la premium sare. Waxaa loogu talagalay iyadoo la isticmaalayo biraha iyo taabto wanaagsan. Ka sokow, Haddii sidoo kale saaxiibadaa iyo qoysaska isticmaalo qalabka Apple, waa ay fududahay in aad ku sii dabajiraan iyaga la via iMessage, Facetime, iwm Haddii aad wax qiimeeyaan in, iPhone 5s waa xulasho wanaagsan.
Marka ay timaado in nooca furan, Samsung S5 fiican ka badan iPhone 5s badan. Samsung S5 aad bixisaa fududahay in maamulka file iyo kala iibsiga helaan. Intaa waxaa dheer, monitor garaaca wadnaha ku Samsung S5 kuu ogolaanaysaa inaad fiiro gaar ah u dhow yahay inuu daryeelka caafimaadka ee aad daqiiqad kasta. Sidee haboon yahay!
Weli wax fikrad ah oo ku saabsan taas oo casriga ah waa ka sii wanaagsan, 5s iPhone ama Samsung S5? Hel info badan oo ku saabsan isbarbardhigga u dhaxeeya .
Qaybta 2. Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5
Heshiis telefoonka aad ah uu dhamaado oo la doonayo in la beddelo telefoonka ah? Samsung Galaxy S4 iyo iPhone 5 yihiin doorasho wanaagsan oo aad u. Hako oo u fiiriyaan dadku u dhexeeya labada casriga ah. Ha welwelin, qayb ka mid ah kuwan soo socda ayaa la is barbardhigay S4 Galaxy iyo iPhone 5 oo wuxuu idin tusin khilaafaadka ka.
136,6 x 69,8 x 7.9 mm 123,8 x 58.6 x 7.6 mm
White, madow White, madow
Core Bawdada Dual core, A6
4.2.2 Android macruufka 6
Kaydinta: 16GB / 64GB; RAM: 1GB
Kaydinta: 16GB / 32GB / 64GB;
Samsung Kies Lugood
Marka la barbardhigo More dhexeeya Samsung Galaxy S4 iyo iPhone 5 >>
Qaybta 3. Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5
Samsung Galaxy S3 ama iPhone 5, taas oo ah mid ka mid ah ayaa kugu habboon? Fiiri kiniin ah oo aad ka heli doonto jawaab.
136,6 x 70.6 x 8.6 mm 123,8 x 58.6 x 7.6 mm
White, madow, casaan, buluug iyo in ka badan White, madow
4.0.0 Android macruufka 6
Hel info dheeraad ah oo ku saabsan isbarbardhigga u dhexeeya Samsunug Galaxy S3 oo iPhone 5 >>
Qaybta 4. Samsung vs iPhone, taas oo ah mid aad ugu jeceshahay
Ku rakib, uninstall & Update Samsung Kies on PC
Ku rakib, Update iyo uninstall Samsung Kies Mac
Content Nuqul ka Samsung si iPhone
Demi Xogta laga macruufka in Samsung
Content Dhoofinta ka iPad in Samsung
> Resource > Samsung > Samsung VS iPhone: Waa kuwee Mid Aad Sameyn Sida wanaagsan?